Save & Win Promotion - Myanmar Citizens Bank (MCB)
Save & Win Promotion
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် MCB ၏ အသစ်စတင်လိုက်သည့် “Save & Win” “ငွေစုမယ် ကံထူးမယ်”အစီအစဉ်သည် MCB ဘဏ်တွင် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း၊ ငွေစုဘဏ်စာရင်းများဖြင့် “စုငွေများများစုပြီး လစဉ်ကံထူးခွင့်များ ”နှင့်အတူ ဆုမဲများရယူနိုင်မည့် အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း (Current Account) တွင် အနည်းဆုံး စာရင်းအပ်ငွေကျပ် (၁) သိန်း ၊ ငွေစုဘဏ် စာရင်း (Saving Account) တွင် အနည်းဆုံး စာရင်းအပ်ငွေကျပ် (၁၀) သိန်း စုငွေများဖြင့် စတင်အပ်နှံပြီး လစဉ်ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ အပ်ငွေများများ စုလေ၊ ကံစမ်းခွင့်အခွင့်အရေး များများရနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ လစဉ် ပထမပတ် (၁) ရက်မှ (၇) ရက်အတွင်း ကံထူးရှင် များရွေးချယ်ပြီး ဆုကြီး များကို မဲ‌ဖောက် ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
စုငွေများများစုပြီး လစဉ် ကံထူးခွင့်များများ ရနိုင်မည့် အခွင့်အရေးအရေးရရှိနိုင်ပါသည်။
စာရင်းသစ်ဖွင့်သူတိုင်းအတွက် MCB Bank မှ ဝန်‌ဆောင်မှုအသစ်များဖြစ်တဲ့ Mobile Banking App ဝန်‌ဆောင်မှုနဲ့ အတူ MCB Co-branded International Debit Card တွေကိုလည်း ထပ်မံရရှိပြီး ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မည့် အခွင့်အရေးရရှိနိုင်ပါသည်။
MCB Mobile Banking App ဝန်ဆောင်မှုမှ MCB စာရင်း အချင်းချင်း ငွေလွှဲခ အခမဲ့ ဖြင့် ငွေလွှဲနိုင်ပါသည်။
MCB မှ အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် MPU-JCB Co-branded International Debit Card အား ကဒ်ဖိုးတစ်နှစ်စာ အခမဲ့ ဖြင့် ရယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
“Save & Win” ငွေစုမယ် ကံထူးမယ် အစီအစဉ်တွင် MCB ဘဏ်၏ စာရင်းရှင်အပ်ငွေ (Current Account) စာရင်းသစ် ဖွင့်သည့် Customer များ၊ လက်ရှိစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိ‌ သော ငွေစုဘဏ် စာရင်း (Savings Account) Customer များအားလုံး သတ်မှတ် အနည်းဆုံးစုငွေများဖြင့် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
လက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး စာရင်းရှင်အပ်ငွေ စာရင်း (Current Account) Customer များသည် ယခုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
MCB ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်‌သော မိသားစုဝင်များ ယခုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း (Current Account) တွင် အနည်းဆုံး အပ်ငွေကျပ် (၁) သိန်း ထားရှိပြီး (၁၄) ရက်အထက် အပ်ငွေထားရှိမှသာ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း (Current Account) တွင် အပ်ငွေ (၁) သိန်း တိုင်းအတွက် ကံစမ်းခွင့် အခွင့်အ‌ရေး တစ်ကြိမ်ရရှိပြီး၊ စုငွေ များများစု‌ပြီး ကံစမ်းခွင့် များများရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ အပ်ငွေကျပ် (၅) သိန်း လျှင် ကံစမ်းခွင့် (၅) ကြိမ်)
ငွေစုဘဏ် စာရင်း ( Savings Account) တွင် အနည်းဆုံး စာရင်းအပ်ငွေကျပ် (၁၀) သိန်းထား ရှိပြီး (၁၄) ရက်အထက် အပ်ငွေထားရှိမှသာ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေစုဘဏ်စာရင်း ( Savings Account) တွင်အပ်ငွေ (၁၀) သိန်း တိုင်းအတွက် ကံစမ်းခွင့် အခွင့်အ‌ရေး တစ်ကြိမ်ရရှိပြီး၊ စုငွေ များများစု‌ပြီး ကံစမ်းခွင့် များများရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ အပ်ငွေကျပ် (၂၀) သိန်း လျှင် ကံစမ်းခွင့် (၂) ကြိမ်)
လစဉ် (လကုန်‌နောက်ဆုံး ဘဏ်ဖွင့်ရက်အပြီး) တွင် တစ်လတာ ကံစမ်းခွင့် ရရှိသည့် စာရင်းပိတ် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး လစဉ် (၇) ရက်‌နေ့တိုင်း MCB Facebook Pag မှတစ်ဆင့် ကံထူးရှင်များ ရွေးချယ်ပြီး ဆုကြီးများကို မဲ‌ဖောက်ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်သည်။ (မဲ‌ဖောက်ရွေးချယ်မည့်ရက် အပြောင်း အလဲ ရှိနိုင်ပါသည်)
September Ticket No.
Download Tickets No. List
August Ticket No.
WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCERN YOU MAY HAVE,
© 2020 MCB. All Rights Reserved.